Cadaadiska Kiimikada - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
Guud ahaan waa la ogyahay in tuubooyin iyo rakibyo ka sameysan walxaha kuleylka leh si balaaran loogu adeegsado warshadaha halka gudbinta dareerayaasha aadka u daxalka badan iyo gaasasku ay u baahan yihiin qalab dhisme oo tayo sare leh, oo ay ka muuqato iska caabin u nugul daxalka. Birta aan xarka lahayn, birta dahaarka leh, muraayadda iyo qalabka dhoobada ayaa badiyaa si faa'iido leh loogu beddeli karaa walxaha kuleylka leh, iyadoo la hubinayo nabadgelyada, kalsoonida iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee xaaladaha la midka ah.
Weerar Kiimiko ah oo ku saabsan qalabka 'Thermoplastics & Elastomers'
1. Bararka polymerku wuu dhacaa laakiin polymerku wuxuu ku noqdaa siduu ahaa haddii kiimikada laga saaro. Si kastaba ha noqotee, haddii polymerku leeyahay walxo isku dhafan oo ku milmi kara kiimikada, sifooyinka polymerka waa la beddeli karaa sababta oo ah ka saarista maaddadan iyo kiimikada lafteeda ayaa sumoobi doonta.
2. Cusbada salka ama moleculeyaasha polymer-ka waxaa lagu beddelay iskutallaab isku xirnaanta, oksaydh, falcelinta beddelaadda ama kala-bixinta silsiladda. Xaaladahaas polymer-ka laguma soo celin karo ka saarista kiimikada. Tusaalooyinka noocan ah weerarka ku saabsan PVC waa aqua regia oo ah 20 ° C iyo gaaska koloriin qoyan.
Waxyaabaha Saameynaya Cadaadiska Kiimikada
Dhowr arrimood ayaa saameyn ku yeelan kara heerka iyo nooca weerarka kiimikada ee dhici kara. Kuwani waa:
Diirad saarid: Guud ahaan, xaddiga weerarku wuxuu ku sii kordhayaa feejignaanta, laakiin xaalado badan waxaa jira heerar ka-hooseeya oo ka hooseeya taas oo aan wax saameyn ah oo kiimikaad ah aan lagu xusi doonin.
• Heerkulka:Sida geeddi socodka oo dhan, heerka weerarku wuu kordhaa kolba heer kulka ayaa kordha. Mar labaad, heer kulka marinku wuu jiri karaa.
• Muddada Xiriirka: Xaaladaha badankood sicirka weerarku waa gaabis iyo muhiimad keliya xiriir joogto ah.
• Cadaadis: Qaar ka mid ah polymer-yada walaaca ku jira ayaa mari kara heerar sare oo weerar ah. Guud ahaan PVC waxaa loo arkaa mid aan xasaasi u ahayn "daxalka walaaca".
Macluumaadka Cadaadiska Kiimikada